नेपालमा आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण, के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुदैन ? - Latest Nepali News
नेपालमा आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण, के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुदैन ?
जुन 21, 2020 जुन 21, 2020 Bishwa Ghatana0Comments खण्डग्रास सूर्यग्रहण, जनकपुर, झापा, पोखरा, भद्रपुर, महेन्द्रनगर, लिम्पियाधुरा, सूर्यग्रहण
१ असार २०७७ काठमाडौं : नेपालमा आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दै छ । नेपालमा बिहान १० बजेर ५५ मिनेटबाट सुरु हुने सूर्यग्रहण अपराह्न दुई बजेर २४ मिनेटमा समाप्त हुने छ ।
मध्याह्न १२ बजेर ४१ मिनेट जाँदा काठमाडौंबाट सूर्य करिब ८८ प्रतिशत ढाकिएको देखिन्छ । उक्त समयमा वातावरणीय तापक्रम घटेर चिसो अनुभव हुने छ ।
यस्तै नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै ९८ प्रतिशतसम्म सूर्य ढाकिएको देखिने छ ।
सूर्य ग्रहणको समयमा के गर्ने र के नगर्ने?
घर भित्र रहनुहोस्।
गर्भवती महिलाहरूले सतर्क रहनुपर्छ ।
ग्रहणको समयमा सूर्य किरणहरू प्रवेश गर्नबाट रोक्न ढोका झ्यालमा पर्दा राख्नुहोस्।
कुश वा तुलसी पातहरु ग्रहण सुरु हुनुभन्दा पहिले खाद्यान्न र पानीको भाँडामा राख्नुहोस ।
महा मृत्युंजय मन्त्र जप गर्नुहोस्।
ग्रहण सकिएपछि नुहाउनुहोस्।
घर सफा गर्नुहोस् र गंगाजलले यसलाई शुद्ध पार्नुहोस्।
नाङ्गो आँखाले घाममा नहेर्नुहोस्।
गर्भवती महिलाहरूले यस अवधिमा सुत्न वा कुनै गतिविधि गर्नु हुँदैन।
सुतक अवधिमा खाना खाने वा पानी पिउने नगर्नुहोस्।
अघिल्लो दिनको बाँकी खाना नखानुहोस्
कुनै नयाँ शुभकार्य जस्तै नयाँ प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर गर्ने वा ग्रहणको समयमा नयाँ उद्यम शुरू गर्ने नगर्नुहोस् ।
नोट: लेखमा उल्लिखित सुझाव र सुझावहरू ज्योतिषीय आधारलाई आधार मानि सामान्य जानकारी उद्देश्यका लागि मात्र हुन् र यो आधिकारीक सल्लाहको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन।
← नेपाल भारत सिमा विवाद समाधानमा तगारो बनेका जयसंकर
पौष्टिक आहर, व्यायाम र उच्च मनोस्वास्थ्य आवश्यक: प्रधानमन्त्री →
मनीषाले नेपालको नयाँ नक्सालाई समर्थन गरेपछि बलिवुडमा हलचल
मे 21, 2020 मे 21, 2020 Bishwa Ghatana 0
नेपालको नयाँ नक्सा, लिम्पियाधुरा सहित ३३५ किमि नेपाली नक्सामा